प्रकाश सायमी, (ललितपुर )
धेरैवेरदेखि संघारमा कसैको आहटले
आकाशमा कागले बादललाई जिस्काइरेहजस्तो
कोही आउने सन्देश लिएर विहानीमा सूर्यले पुलिन्दा ल्याएजस्तो
हुलाकीले चिठी लुकाएर डाँडामाथिबाट चिहाएजस्तो
वर्षौंवर्षदेखि दाहिने आँखा फर्फराइरहेको छ
यो परदेशमा ।
दैलो खोली हेर्दा संघारमा कोही रहेनछ
चैतको चञ्चल हावाले पो जिस्केको रहेछ
को आउँछ र, यहाँ ?
को आउनु थियो र ?
कसले पो मेरो नाउँमा चिठी ल्याउँछ यो परदेशमा
छिमेकीको छानामा सुकाएको पलँगको तन्नामा
मंसिरको बैँशालु घाम लडिबुडी खेल्दैछ
मेरो सिरानीमा माघको कठ्याँग्रिदो रात
हे धरा ! मलाई एकमुठी घाम
पठाइदिनु यो परदेशमा ।
सात साल आयो
सत्र साल गयो
कसैलाई नपर्खिनु भन्थ्यो समयले यो परदेशमा ।
नसम्झिनु भन्थ्यो आफ्नो घरलाई पनि ।
बगाएछ त्यो घरलाई । त्यो बालापन र त्यो बैंशलाई ।
सबैलाई साँचेर राखेको छु
यो बैंशको क्यालेण्डरमा ।
आफैलाई राखको छु यो परदेशमा
आफैलाई झुकाएर राखेको छु यो परदेशमा ।